I-cyclalg, iprojekthi yoyilo loomatshini be-biorefinery kunye ne-algae | Ukuhlaziywa okuluhlaza
I-cyclalg, iprojekthi yase-Yurophu yokudala oomatshini be-biorefinery kunye ne-algae
IsiJamani sasePortillo | | Biodiesel, IBiomass
Icyclalg Yiprojekti yaseYurophu enjongo yayo ikukwenza i-biorefinery apho zonke iinkqubo eziyimfuneko ziphuhliswa kwaye zaqinisekiswa khona ukuze zikwazi ukuvelisa i-biodiesel ngokutyala imicroalgae. Amaziko obuchwephesha amathandathu avela IFransi, iNavarra kunye ne-Euskadi kwaye iyakuhlala isithuba seminyaka emithathu nohlahlo-lwabiwo mali lwe 1,4 million.
Ngenjongo yokuvelisa i-biodiesel kunye nezinye i-fuels ngokulima i-microalgae, yenza imodeli entsha yoqoqosho olujikelezayo apho inkunkuma evelisiweyo isetyenziswa njengokutya kwe-microalgae kwaye ke incede ukwanda kwayo. Bakwasebenzisa i-biomass ye-algae, bandise ubomi obuncedo benkunkuma kwinkqubo kwaye banokufumana iimveliso ezithile ezisetyenziselwa amachiza, amandla kunye nomzi mveliso wezolimo.
INeiker-TecnaliaIziko lobuchwephesha be-Euskadi, liphethe ulungelelwaniso lweprojekthi yeCyclalg. Ukwenza oku, kuyakusebenza ukuseka inzuzo kunye nokuzinza kweemeko zezityalo ezincinci zemveliso ye-biodiesel.
Le projekthi sisigaba esilandelayo seprojekthi edlulileyo I-Energreen eyahlala ukusuka ngo-2012 ukuya ku-2014, amalungu ayo uninzi lwawo lufana nolweCyclalg. Le projekthi yangaphambili iqinisekisile ukusebenza kwe-algae ukuze ikwazi ukuvelisa i-biodiesel kwaye ikwazi ukusebenzisa i-biomass yayo. Into ebilahlekile, phakathi kwezinye izinto, bekukho iingxaki ezahlukeneyo eziye zafunyanwa xa kusetyenziswa inkunkuma yendalo ekhutshwe kwioyile. Ezi ntsalela ziluncedo kakhulu ngenxa yomthombo wazo weeproteni kunye neeswekile ezisebenza njengokutya kwe-microalgae.
Kwelinye icala, iya kuzama ukuphucula ubomi obuncedo benkunkuma kwaye iyenze ngobuninzi bayo, ngaphandle kwe-biodiesel, ukudibanisa i-biomethane, ukutya kwemveliso kunye ne-biofertilizers. Le projekthi ixhaswe ngemali yi-65% ngu Ingxowa-mali yoPhuhliso yeNgingqi yaseYurophu. Ndiyabulela Inkqubo ye-Interreg VA eSpain-France-Andorra ixesha lazo lisusela ku-2014 ukuya ku-2020 kwaye iinjongo zalo ikukukhuthaza umanyano lwezoqoqosho nezentlalo kwezi ndawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Izinto eziphilayo » Biodiesel » I-cyclalg, iprojekthi yase-Yurophu yokudala oomatshini be-biorefinery kunye ne-algae
jose lopez sitsho
Kuyinyani ukuba ngelitha enye unokwenza i-1000km
Phendula uJoseph lopez
Yiba negadi yakho yendalo ekhaya kunye nolawulo ekutyeni
Urhulumente wase-Jamani uyavuma ukukuthintela ukukhwabanisa ngokungapheliyo